कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरण अदालतमा १३ जनालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद माग – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरण अदालतमा १३ जनालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद माग
२०७१ बैशाख १, सोमबार ०३:२८ गते
भरतपुर । कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरण अदालत पुगेको छ । गोरखा फुजेलका कृष्णको सशस्त्र संघर्षका बेला विसं. २०६१ साल जेठ २४ मा तत्कालिन माओवादीले चितवन रत्ननगरमा गोली हानी हत्या गरेको थियो ।
दुई–दुई पटक आरोपित समाएर मुद्दा दर्ताका लागि फाइल सरकारी वकिललाई बुझाइए पनि यसअघि यो प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको थिएन ।
तेस्रो पटक समातिएका दुईजनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि जिल्ला न्यायाधीवक्ता (सरकारी वकिल) एकनारायण लम्सालले आइतबार चितवन जिल्ला अदालतमा १३ जनाविरूद्ध अभियोगपत्र दायर गरेका हुन् । सवै अभियुक्तलाई ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १३ उपदफा एकअनुसार सजाय हुनुपर्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
सो दफा अनुसारको अभियोग ठहर भएमा अदालतले सर्वश्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाउने छ । मान्छे मारेमा हुने सवैभन्दा ठूलो सजाय यही हो । अभियुक्तमध्ये ११ जनाविरूद्ध चितवन प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको थियो । जाहेरीमा नाम नपरेको थप दुईजना गोरखा फुजेलकी जानुका पौडेल र चितवन रत्ननगरका रूद्र आचार्यविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
अभियोग दायर भए पनि आइतबार अभियुक्तको बयान लिन नभ्याएकाले थुनछेक सम्बन्धी बहस हुन नसकेको अदालतका स्रेस्तेदार विद्याराज पौडेलले जानकारी दिए । घटनाका आरोपितलाई गिरफ्तार गरेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्छ ।
अनुसन्धान पूरा गरेपछि प्रहरीले सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाउँछ । सो प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा दायर गर्छन् । मुद्दा दायर भएपछि फैसला नहुँदासम्म अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि साधारण तारेखमा रिहा गर्ने या धरौटीमा छाड्ने वा थुनामा राख्न कारागार पठाउने भन्ने बारेमा न्यायाधीसले आदेश दिने गर्छन् ।
कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरणमा चितवन प्रहरीले चैत्र ६ गते राति आरोपितमध्येका छविलाल पौडेल र भीमसेन पौडेललाई गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । यसअघि आरोपितमध्येका रामप्रसाद अधिकारी र अजिव भनिने पर्शुराम पौडेललाई गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान गरे पनि मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुग्ने भन्दै सरकारी वकिलको निर्णयले छुटेका थिए ।
भदौ २१ मा समातिएका आरोपितमध्येका रामप्रसाद र मंसिर २१ मा समातिएका अजिव २५ दिन हिरासतमा बसेर छुटेका थिए । प्रहरीले त्यो बेला गरेको अनुसन्धानले मुद्दा दायर गर्न प्रमाण नपुग्ने भन्दै मुद्दा अदालतमा नलैजाने सरकारी वकिल पनि लम्साल नै थिए ।
प्रहरीले घटनामा गोली हान्नेहरु जाहेरीमा नाम परेकाभन्दा बाहिरका रहेको बताएको छ । अधिकारीलाई गोली हान्नेमा ऋषिराम लामिछाने, मदन पौडेल र रुद्र आचार्य रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उनीहरु माओवादीको विशेष कार्य दस्ता स्पेशल टाक्स फोर्स (एसटीएफ) रहेको प्रहरीको भनाइ छ । ऋषि र मदनको युद्धकालमा नै सुरक्षा कारबाहीमा मृत्यु भएको चितवनका प्रहरी उपरीक्षक प्रद्युम्न कार्कीले बताए । रूद्र हाल बेलायतमा छन्् ।
अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि हुने आदेशका आधारमा प्रहरीले रेडकर्नर नोटिस जारी गरेर इन्टरपोलको सहयोगमा आचार्यलाई नेपाल ल्याउने प्रहरीको तयारी छ । हत्या लगत्तै ६१ सालको जेठ २६ मा दोषी पहिचान गरी कारबाही गरी पाउँ भनेर कृष्णका बुबा नन्दप्रसादले चितवन प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।
त्यस्तै, विसं. २०६२ सालको मंसिर २६ मा मृतकका दाजु नुरप्रसाद अधिकारीले आफ्नो भाइको हत्यामा संलग्न हुनेहरु ११ जनाको नाम नै किटान गरेर चितवन प्रहरीमा उजुरी दिए । हालसम्म नसमातिएका व्यक्तिहरुमा रामप्रसाद अधिकारी नै नाम गरेका गोरखाका एकजना पनि छन् ।
त्यस्तै, गोरखाका मेघनाथ पौडेल, विष्णु तिवारी, सुभद्रा अधिकारी, सीता अधिकारी, कालिप्रसाद अधिकारी, हिमलाल अधिकारीको पनि किटानी जाहेरीमा नाम परेको छ । प्रहरीको अनुसन्धानले माओवादी नेतृ हिसिला यमीको सहयोगी रहेकी जानुका पौडेलको पनि घटनामा संलग्नता देखिन आएकाले उनीविरूद्ध मुद्दा दायर भएको सरकारी वकिल लम्सालले बताए ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले सशस्त्र संघर्षमा भएको घटनामा अनुसन्धान अगाडि बढाउन नहुने निर्णयअनुसार बन्द रहेको अनुसन्धान प्रक्रिया कृष्णका बाबुआमाको लगातारको अनसनपछि यो भदौंमा सुरू भएको थियो । रामप्रसाद गिरफ्तार भएपछि भदौ २२ मा उनीहरुको अनसन रोकिएको थियो ।
तर मुद्दा नै नचली असोज १४ मा रामप्रसाद छुटेपछि कृष्णका बाबुआमा नन्दप्रसाद र गंगामाया कात्तिक सात गतेदेखि लगातार अनसनमा छन् । उनीहरुको अनसनको बलले नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
जयमंगलामा रहेका हजुरबा र हजुरआमालाई भेट्न गोरखाबाट आएका कृष्णलाई सुराकीको आरोपमा हत्या गरेको माओवादीले बताएको थियो । सशस्त्र संघर्षका घटना सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर अनुसन्धान गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै एकीकृत नेकपा (माओवादी) र नेकपा–माओवादी यो अनुसन्धान प्रकृयाप्रति रूष्ट छन् ।
छोरीलाई करणी गरेको आरोपमा पक्राउ
कावासोती, २० फागुन । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा गैँडाको आक्रमणमा परी आज बिहीबार एकको मृत्यु भएको छ । नवलपुरको मध्यबिन्दु...